I-Pauza - igumbi losapho labantu abayi-4nangaphezulu - I-Airbnb
I-Pauza - igumbi losapho labantu abayi-4nangaphezulu
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguAlina
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAlina iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Sinamagumbi ayi-3 anelanga kumgangatho wokuqala wendlu yethu. Kwesi sibonelelo, igumbi losapho elineebhedi ezimbini ezilala umntu omnye nebhedi enye. Le ndlu ikwindawo ethe cwaka, esezilalini, engqongwe ziinduli, amahlathi kunye neendawo zokugcina indalo. Ukuqhuba iyure ukusuka eKrakow. Kulula ukufikelela ngololiwe okanye ngemoto. Ukukwazi ukufaka intente egadini. Sinikezela ngesidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa - siyabhatalelwa.
Inkcazelo engakumbi kunye neefoto ku: Facebook.com/price} pauza/
Izidlo sizilungiselela ngokwethu, ukusuka kwiimveliso zasekhaya ezisempilweni, ezikumgangatho ophezulu. Sibhaka isonka kwaye sizirola. Kunokwenzeka ukuba uququzelele ikhonsathi yokuphumla kunye nezandi ze-Himalayan izitya, iigongs kunye nezinye izixhobo zobuhlanga, kunye ne-massage yomsindo ngamnye.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
Ukongeza kwizinto ezikhangayo zendalo kwindawo esondeleyo, le ndawo yindawo ebalaseleyo yohambo lwentsapho kunye nokubona indawo: i-Ojcow National Park, iKrakow, iJędrzejów, inqaba yaseKsiąż Wielki, iiNtaba ze-Świętokrzyskie. Uya kufumana apha ukuthula kunye noxolo oluyimfuneko ekuphumleni. Ukongeza, sinikezela ngendawo yokutya emlilweni kunye nezixhobo zokupheka emlilweni. Ngesicelo, silungiselela iindwendwe ukutya, zombini kunye nemifuno, i-gluten-free.